नायक निखिल उप्रेतीपछि रमेश उप्रेतीको पनि श्रीमतीसँग डिभोर्स ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
नायक निखिल उप्रेतीपछि रमेश उप्रेतीको पनि श्रीमतीसँग डिभोर्स !
अभिनेता रमेश उप्रेति र श्रीमती किरण राणासँगको वैवाहिक सम्बन्ध टुट्ने संघारमा पुगेको छ । उनीहरु करिब ६ महिनादेखि अलग बस्न थालेको निकट स्रोतले बतायो ।
पहिलो श्रीमानसँग डिभोर्स लिएर बसेकी किरणले रमेशसँग दोस्रो विवाह रमेश र किरणबीच प्रेम विवाह भएको थियो । उमेरमा रमेशभन्दा किरण केही वर्ष जेठी हुन् । पहिलो श्रीमानसँग डिभोर्स लिएर बसेकी किरणले रमेशसँग दोस्रो विवाह गरेकी थिइन् । रमेश र किरणको कुनै पनि सन्तान छैनन् ।
विवाहपछि रमेश अमेरिका लागेका थिए । पछि किरण पनि उतै गइन् । करिब एक दशक अमेरिकामा बिताएर उनीहरू नेपाल फर्केका हुन् । ५ वर्षअघि नेपाल फर्केका रमेश फेरि चलचित्र क्षेत्रमै सक्रिय भए ।
अमेरिकाबाट फर्केपछि उनले ‘ब्रासलेट’ मार्फत चलचित्रमा कमब्याक गरेका थिए । यो चलचित्र व्यापारिकरूपमा सफल भएन । त्यसपछि होम प्रोडक्सनबाट चलचित्र ‘ऐश्वर्या’ निर्माण गरेका थिए, जसको निर्मात्री श्रीमती किरण थिइन् । यो चलचित्रले सुखद व्यापार गरेको थियो ।
रमेश र किरण बूढानीलकण्ठमा रहेको सीजी भिल्लामा बस्दै आएका थिए । अहिले रमेश श्रीमतीसँग अलग भएर बूढानीलकण्ठमै फ्ल्याट भाडामा लिएर बस्न थालेका छन् । किरण भने सीजी होम्समै बस्छिन् । उनीहरू अदालती डिभोर्सको प्रक्रियामा रहेको बुझिएको छ ।